Jabra Elite 45h, waa saaxiibka ugu fiican ee shaqada telefishanka [DIB U EEGID] | War gadget
Miguel Hernández | 01/05/2021 12:00 | La cusbooneysiiyay 29/04/2021 13:16 | General, Reviews
Shaqada telefoonka Waa halkaan halkaan oo waa inaan sii joogno waxayna sii dhexgalaysa habka aan wax u aragno, sidaa darteed inbadan oo naga mid ah waxay hubaal doorteen inay xafiis yar ka furaan gurigeenna waxaanan ogaanay sida qalabku muhiim ugu yahay nolol maalmeedkeena.
Jabra Wuxuu khabiir ku yahay bixinta alaabada shirarka codka iyo fiidiyowga ee dhammaan noocyada isticmaaleyaasha, markanna waxaan diirada saari doonnaa wax soo saar si cadaalad ah u badan. KUWaxaan si qoto dheer u eegeynaa Jabra Elite 45h dhegaha dhegaha badan, oo ku habboon shaqada taleefanka oo leh qibrad qiimo sare leh, nala soo socodsii iyaga.
3 Isku xirnaanta iyo ismaamulka
4 Tayada codka iyo khibrada isticmaale
Sidaad horeyba ulasocotay, Jabra waa shirkad adeegsata soo saarida wax soosaar heerkeedu sareeyo oo tayo sare leh, waa runti waa isla khibrad aan ku helno kuwaan Jabra 45h. Marka la eego baakadka, shirkaddu had iyo jeer waxay ku sharad dhigtaa minimalism iyo nidaam sanduuqa sanduuqa oo si caddaalad ah wax noogu sheega. Waxa ugu horreeya ee naga yaabiya markaynu kala soo baxno sanduuqa waa fudeydkooda xad-dhaafka ah iyo sida wanaagsan ee ay u dhisan yihiin waxay dareemaan, astaamahan ayaa la socda iyaga oo isticmaalaya maalin kasta. Nidaam hagaajin milimitir wanaagsan oo aan lahayn wax xarig ah oo leh baabaska dhegaha ka korreeya oo si dhib leh u adkeynaya.
Cabirrada: 186 * 157 * 60,5 mm
Miisaanka: Gram 160
Midabada la heli karo: Madow, Madow + Copper, Beige, Buluug, bunni, Madow + Cawr Madow
Wax badan ayey ku leedahay xaqiiqda ah in sameecadda dhagaha laga sameeyay maqaar dardaro iyo suufku waa xumbo xusuus leh, iyadoo tilmaamaysa «L» iyo «R» si toosa loogu qoday iyaga. Waxaan leenahay culeys wadar ah oo kaliya 160 garaam, wax la yaab leh, oo ay weheliso cabirro aad u xaddidan. Dabcan, sanduuqa ayaa keena fiilo USB-C ah oo loo isticmaali doono in lagu soo shubo aaladda oo dhererkeeduna yahay 30 sentimitir, taas oo naga dhigtay dareen qadhaadh iyada oo la tixgelinayo in sameecadaha laftiisu ay ku dhow yihiin 20 sintimitir guud ahaan.
Waxaan si toos ah ugu tagnaa mid kasta oo hadla, labada midig iyo bidixba waxay leeyihiin dhexroor 40 millimitir ah, taas oo aan haba yaraatee wax xun ahayn. Labaduba waxay leeyihiin dahaadh kahortaga buuqa dabaysha kaas oo naga caawin doona wada hadalka iyo dhageysiga muusikada si sax ah xitaa banaanka, wax aan xaqiijinay ayaa si sax ah u shaqeynaya. Isla taasi waxay ku dhacdaa buuqa wicitaanada, waxay leedahay laba makarafoon mas'uul si loo wanaajiyo waxqabadka codkeena sidaasna loo hubiyo in qalabka wax lagu aqbalo uu si sax ah u maqlayo wax kasta oo aan dooneyno inaan sii deyno.
Xadka bandwidiyaha sameecadda: 20 Hz ilaa 20 kHz
Hadalka baaxadda uu ku hadlayo afhayeenka: 100 Hz ilaa 8000 Hz
Laba makarafoon oo MEMS ah
Bluetooth oo leh laba isku mar
Waxaa la yaab leh, oo ka duwan noocyada kale, shirkaddu waxay hubisaa in qalabka waxay leedahay damaanad laba sano ah hortooda biyo iyo siigo boggooda, wax si farxad leh igaga yaabiyay. Qeybtaan wax yar ayaa farsamo ahaan looga baahan karaa Jabra 45h kuwaas oo lagu dhisay qalab xoog-sare leh sida aluminium adonized iyo silikoon leh saliid aan dheg-dheg lahayn. Xaqiiqdu waxay tahay in isticmaalka maalin kasta loo qaddariyo iska caabbinta dheeriga ah ee waxaas oo dhami bixiyaan.
Isku xirnaanta waxay ku salaysnaan doontaa Bluetooth 5.0 kiiskan, oo leh dhammaan shahaadooyinka lagama maarmaanka u ah ujeedkan. Noocyada 'Bluetooth' waa muhiim marka la dhageysanayo muusikada iyo halkan waxaan isku aragnaa sidii maqane weyn oo ah Qualcomm's codec, Si kastaba ha noqotee, waxaan ka helnay kuwa caadiga ah ee ka socda Apple iyo shirkadaha intiisa kale: HSP v1.2, HFP v1.7, A2DP v1.3, AVRCP v1.6, PBAP v1.1, SPP v1.2.
Badhanka loo qoondeeyay si loogu yeero Alexa, Siri, Bixby ama Kaaliyaha Google.
Sida for ismaamul, Ma hayno xogta farsamada ee heerka awoodda batteriga ee mAh. Dhanka kale, shirkaddu waxay noo ballanqaadaysaa illaa 50 saacadood oo muusig ah, wax aan awoodnay inaan xaqiijino oo aad ugu dhow waxqabadka dhabta ah ee dhagaha. Waa in la ogaadaa in dekedda USB-C ay leedahay nooc ka mid ah "lacag deg deg ah" oo noo oggolaan doonta 10 saacadood oo ismaamul leh 15 daqiiqo oo lacag bixin ah, in kasta oo la tixgelinayo in wadarta waqtiga lacag bixinta oo leh adabtarada 5W USB-C ay tahay 1 saac iyo 30 daqiiqo, haddana waxay umuuqataa sida lacagta caadiga ah. Waxay leeyihiin "hab hurdo" oo si otomaatig ah loo hawlgelin doono si loo wanaajiyo waxqabadka batteriga marka aan la isticmaaleynin iyo in otomaatigga loo xiro 24 saac ka dib iyadoo aan la adeegsan
Tayada codka iyo khibrada isticmaale
Sida had iyo jeer dhacda alaabada Shure, waxaan isku aragnaa dhegeysi si wanaagsan loo hagaajiyay. Baasku uma taagna si xad dhaaf ah waxaanan kala saari karnaa dhammaan noocyada kala duwan ee codadka, haa, waxaa xusid mudan inaannaan dalban karin wax ka badan dhagaha kale ee ku jira qiimihiisa. Xaqiiqdii, awoodda baajinta dhawaaqa aamusnaanta ee samaacadaha waa arrin la yaab leh iyadoo la tixgelinayo inay yihiin "dheg dheeri" oo aysan gebi ahaanba xirneyn dhegteenna.
Makarafoonada ayaa si aad ah ugu shaqeeya wada sheekaysiga dhaadheer, marka lagu daro, waxay go'doomiyaan buuqa banaanka kaas oo carqaladeyn kara ama carqaladeyn kara wicitaanada taleefanka. Sameecadaha dhagaha ayaa leh culeys aad u fudud iyo ismaamul arxan daran oo si dhaqso leh noogu horseedaya inaan u maleyno inay noqon karaan xulasho weyn markaan ka hadlayno shaqada teleefonka. ama aad saacado badan kujirto xafiiska cabsi la'aan inaad wicitaan sameyso. Ma u keenaan daal dhegaha iyo madaxa midna culeyska iyo qalabkooda awgiis dhexdhexaad ah oo adkaysi u leh, waa wax aan isleeyahay waa inaan ku iftiimiyaa gorfeyntan.
Sidii aan horey u sheegnay, haddii aad rabto inaad ka carartid dhagaha dhagaha ee TWS markaad shaqeyneyso ama aad maalmo fiican ku qaadaneysid xafiisyada adigoon wicitaanada wicitaanada wicin, Jabra Elite 45h waa dalab aad u xiiso badan oo ku saabsan qiimaha qiimaha tartanka. Waxaad ka iibsan kartaa wax ka yar 99 euro meelaha caadiga ah sida Amazon. Ma caawin karo laakiin waxaan xasuustaa inaanan haysan aptX waana seegi karnaa iyaga, iyo sidoo kale xaqiiqda jirta in sababo jira awgood oo aanan si buuxda u fahmin ay go'aansadeen inay sameeyaan la'aanteed dekedda 3,5mm Jack ee xiriir dhaqameed ka badan.
Ku dhejiyay: May 1 ee 2021
Naqshad adkaysi leh oo aad u raaxo badan
Cod aad ufiican oo hagaagsan
Qiimo aad u adag oo ciriiri ah
Badhannada leh maarayn adag
30cm fiilada USB-C
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Jabra Elite 45h, waa wehelka ugu fiican ee shaqada telefishanka [DIB U EEGID]